Ifektri Yezisombululo Zamazinyo | I-China Dental Solutions Abakhiqizi nabahlinzeki
Design Idizayini yomugqa okhulisiwe ihambisana nokuhlala nokuma oku-ergonomic, okulungele ukwelashwa isikhathi eside.
■ Umcamelo wesihlalo wakhelwe ngendlela ehlukanisiwe, kuthi ukuphumula konyawo kwakheke nge-PU eqinile ekhihliza amagwebu, emelana nokugqokwa futhi okungelula ukuyilimaza. Isihlalo esiphansi kunawo wonke singu-380mm, esivumelana neziguli ukuthi zehle zenyuka.
■ isiguqo sesikhumba esithambile esezingeni eliphakeme ngokusekelwa kwe-lumbar nokwakhiwa kokugcinwa kwekhanda kunomuzwa onamandla wokumboza.
Design Ukuklanywa kwesitulo okwenziwe ngepentshisi kukhulisa isikhala somlenze wodokotela futhi kuqinisekise ukufinyeleleka okungenamkhawulo phakathi kodokotela neziguli.
I-XH605 Unit Yamazinyo
Iyunithi yokufakelwa kwamazinyo iyidivayisi yokwelashwa kwamazinyo eyenzelwe ngokukhethekile ukuhlinzwa kokufakelwa kwamazinyo. Ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo ezikhethekile zokukhanyisa ukuhlinzwa kwamazinyo, ukuncela nokunye.
I-XH502 Unit Yamazinyo
Iyunithi Yamazinyo iGrace-D XH502 yathuthukiswa ngokususelwa kwingqikithi ethi "Jabulela ukwelashwa" yi-SHINVA. Isilawuli esizenzakalelayo se-microcomputer kanye nesibonisi se-LCD esigcwele sangempela senza ukusebenza kukadokotela kube lula futhi kuhlakaniphe. Idizayini ye-ergonomic yenza isiguli sikhululeke futhi sinciphise ukungezwani nobuhlungu ekwelashweni. Ukusebenza kwayo okuhle okuphelele kusiza iziguli ukuthi zikujabulele ukwelashwa.
I-XH501 Unit Yamazinyo
Iyunithi Yamazinyo iGrace-D XH501 yathuthukiswa ngokususelwa kwingqikimba "yokuphathwa ngokunethezeka" yi-SHINVA. Idizayini ibheka ukunethezeka nokulula kokuvakashelwa kwesiguli nokusebenza kadokotela. Ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo okuhle kakhulu, ukwakheka kwe-ergonomic, i-microcomputer control othomathikhi nenqubo yokukhiqiza isikhunta kwenza kube nokusebenza okuthembekile, ukusebenza okulula nokubukeka okuhle.
Smart okuzenzakalelayo imshini-magciwane
I-Smart Series washer-disinfector isetshenziselwa ukuwasha, ukubulala amagciwane kanye nokomisa ithuluzi (kufaka phakathi okokusebenza kwamazinyo), izinto zokwenza ingilazi nezitsha zepulasitiki esibhedlela i-CSSD noma igumbi lokusebenza.
Umphumela wokuwasha nokubulala amagciwane uthobela izinga le-EN ISO 15883 lomhlaba jikelele.
KAKHULU Steam Sterilizer-Class B
ISITOLO SENSIZA ESIKHULU KAKHULU: I-T18 / 24/45/80 iyi-sterilizer yetafula le-Class B. Njengohlobo lwenzalo yokuhlanza umfutho ophakeme, kuthatha umusi njengendawo yayo yokuvala inzalo ephephe ngokushesha nangokomnotho. Zivame ukusetshenziswa emnyangweni wamazinyo, umnyango wezifo zamehlo, igumbi lokusebenzela kanye ne-CSSD ukwenza inzalo yethuluzi elisontekile noma elingavaliwe, indwangu, izitsha , isiko eliphakathi nendawo, uketshezi olungavaliwe njll.
INTSHONZI KAKHULU YENSI
I-STM Sterilizer KAKHULU: U-T60 / 80 wuhlobo lwenzalo yokuhlanza umfutho ophakeme, kuthatha umusi njengesixhobo saso sokuvala inzalo esiphephe ngokushesha futhi esinomnotho, esisebenza ngenkani. Uhlelo oluphumelelayo lokumpompa kabili nomthamo wamandla wokugcina amandla omkhulu lushesha ukwedlula i-MOST-T ejwayelekile yochungechunge lwenzalo yesivinini sokumpompa nokukhiqiza umusi. Zijwayele ukusetshenziswa emnyangweni we-stomatological, umnyango we-ophthalmological, igumbi lokuhlinzwa kanye ne-CSSD ukwenza inzalo yendwangu yensimbi esontekile noma engavaliwe, izitsha, isiko eliphakathi nendawo, uketshezi olungavaliwe njll.
I-Dmax-N Digital Cassette Sterilizer
I-Digital Cassette Sterilizer iyithuluzi lokuzalisa inzalo elisheshayo elizenzekelayo elisebenzisa umusi wengcindezi njengendlela ephakathi. Ifanele ukuvalwa inzalo yamadivayisi ezokwelapha angakwazi ukumelana nengcindezi yesitimu, njengezandla zamazinyo, izinsimbi zokunemba kwamehlo, i-endoscope eqinile yamazinyo nethuluzi lokuhlinza, njll.